के सिक्ने चीनबाट ? - China Radio International
के सिक्ने चीनबाट ?
(GMT+08:00) 2020-01-08 10:54:35
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' यही मंसिर अन्तिम साता लगभग ६० जना नेता तथा कार्यकर्ता लिएर चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अस्वस्थताका कारण उनको पूर्वनिर्धारित भ्रमण अहिलेलाई स्थगन गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
उनको भ्रमण केही महिनाका लागि स्थगन गरिए पनि पछिल्लो समय महिनैपिच्छे नेपालबाट चीन भ्रमणमा जाने टोलीको लस्कर लाग्ने गरेको छ। चीनले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न नेपाली नेताहरूलाई चीनमा बोलाउने गरेको हो। राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपाल आर्थिक विकासमा पदार्पण हुन थालेपछि यो क्रम अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ।
चीनले नेपालबाट चार प्रकारका व्यक्तिलाई तालिम, प्रशिक्षण, अवलोकन तथा अन्तरक्रियाका नाममा चीन भ्रमण गराइरहेको छ। जसअन्तर्गत पहिलो श्रेणीमा नेपालका राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता छन्। त्यसमा पनि विशेषगरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यदाकदा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि चीनले भ्रमणमा बोलाउने गरेको छ। कहिलेकाहीं केही साना कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई पनि चीनले भ्रमणमा सहभागी गराउने गरेको छ। दोस्रो श्रेणीमा पत्रकार पर्छन्। हरेक महिना नेपाली पत्रकारको समूह चीनमा रहेकै हुन्छ। तेस्रो श्रेणीमा स्थानीय तहका पदाधिकारी रहेका छन्। नेपालमा निर्वाचन भएर स्थानीय तह बनिसकेपछि चीनले विभिन्न चरणमा यस्तो भ्रमण गराउन थालेको हो। चौथो श्रेणीमा नेपालका कर्मचारी पर्छन्। स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरूलाई विभिन्न समूह बनाएर चीनले बोलाइरहेको छ। नेपालका विभिन्न सेवा र समूहका सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारीलाई आफ्नो देशमा बोलाएर चीनले प्रशिक्षण पनि दिइरहेको छ।
आखिर चीनले नेपालबाट यति धेरै मानिस बोलाएर के सिकाउँछ ? भ्रमणमा जानेहरू चीनबाट के सिकेर फर्किन्छन् ? चीन भ्रमणबाट फर्किएका नेपालीले चिनियाँ अनुभव कहीं–कतै लागू गर्छन् ? यी प्रश्न सामान्य लागे पनि देश निर्माणमा अहम् भूमिका राख्छन्। अहिलेसम्म नेपालमा यी विषयमा न गम्भीर बहस भएको छ न त विश्लेषण नै। नेपालीका लागि चीन भ्रमण गर्नु ज्ञान, सीप, अनुभव, विवेक, शिक्षा, पाठ लिनु नभई केही दिनका लागि बिदा मनाएर मनोरञ्जन लिनु मात्र भएको छ।
फेरि पनि प्रश्न त जहाँको तहीं छ आखिर के सिकाउँछ, चीनले ? मूलतः चीनले नेपालीलाई प्रशिक्षण गराउने विषय गरिबी निवारणमा आफूले गरेका उपलब्धि, पूर्वाधार तथा प्राविधिक विकास, चिनियाँ चरित्रको समाजवादी व्यवस्था, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशैली, चिनियाँ कृषि व्यवसाय, बिआरआईको अधवारणा र प्रभाव, चिनियाँ कूटनीति, चिनियाँ अर्थतन्त्र, चिनियाँ राजनीतिक प्रणाली आदि हुन्। सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकले सटिक र स्पष्ट भाषामा उल्लिखित विषयमा तथ्य–तथ्यांकसहित जानकारी दिन्छन्। नेपालीलाई मात्र नभई जुनसुकै देशबाट बोलाइएका प्रतिनिधिलाई चिनियाँले सिकाउने कुरा यही हुन्।
सेमिनार हलमा पावरप्वइन्टबाट प्रस्तुति दिने मात्र होइन, सम्बन्धित क्षेत्रमा लगेर भ्रमण गराउने चलन पनि छ। चीनले तिब्बत, युन्नान, सिचुवान, कान्सु, क्विचौजस्ता प्रान्तमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। यी प्रान्त चीनका तुलनात्मक रूपमा कम विकसित र गरिब नागरिक धेरै भएका प्रान्त हुन्। सन् २०२० सम्ममा चीनले देशभरिका विपन्न नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गराएर गरिबी उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको छ। चीनले विकास गरेको पद्धति र नमुना कार्यक्रमबाट भएका गरिबी निवारणका उदाहरण सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर अवलोकन गर्न पाउनु राष्ट्रका लागि केही गरौं भन्ने व्यक्तिका लागि अवश्य राम्रो अवसर हो।
चीनले गरिबी निवारणका लागि प्रयोग गरेका ढाँचाहरूमा पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग, आधुनिक कृषि प्रणाली, इवाणिज्य, पशुपालन, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि छन्। पर्यटन प्रवद्र्धनमा स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्दै सुरु गरेको होमस्टेले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान गरेको छ। उद्योग तथा कलकारखाना खोलेर रोजगारी वृद्धि गरिएको छ भने विकसित प्रान्तमा रहेका ठूला उद्योगहरूले गरिबी भएका क्षेत्रमा गएर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारणमा योगदान गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। सहकारी (कम्युन)मार्फत गरिएका कृषि कार्य र पशुपालनले आयआर्जनमा सहयोग पु-याएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई अनलाइनमार्फत चीनभरि तथा विदेशमा पनि बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षासँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य बिमा व्यवस्थाले गरिबीको कुचक्रबाट नागरिकलाई बाहिर निकालेको छ। प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाई नयाँ स्थानमा बसाइँ सारिएको छ। लघुवित्तले स्थानीयलाई स्वरोजगार हुन प्रेरित गरेको छ।
गरिबी निवारणमा चिनियाँ अनुभव विश्वकै लागि अनुकरणीय छ। विकसित देशका अनुसन्धानकर्ताहरू चीनमा आएर गहन अध्ययन गरिरहेका छन्। उस्तै भूगोल र परिवेशमा रहेका नेपाल र चीनले यस विषयमा गहन सहकार्य गर्न सक्छन्। स्वरोजगारी र कृषि उत्पादनसँगै सांस्कृतिक प्रवद्र्धनमा नेपालले थुप्रै होमस्टे सञ्चालन गर्न सक्छ। अहिले केही ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन भएका पनि छन्। नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर कृषि उत्पादनमा लगाउन सके नेपाल थुप्रै कुरामा स्वावलम्बी बन्न सक्छ। उत्पादनशील युवा बारी बाँझो राखेर खाडी मुलुक भासिएपछि भारतीय प्याजको भाउ बढ्नु तथा विषादीयुक्त भारतीय तरकारीले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो।
गरिबी निवारणबाहेक चीनले प्रशिक्षण दिने अर्को विषय हो– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना, पद्धति, विकास र कार्यसञ्चालन विधि। १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा लगभग ९ करोड नागरिक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य बनेका छन्। कुनै पनि व्यक्तिले उच्च माध्यमिक तह पार गरेपछि (१८ वर्षको उमेरमा) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिन पाउँछ। त्यो समयमा कसैले पार्टी सदस्यता लिएन र ३० वर्ष कटेपछि पार्टी सदस्यता लिनप-यो भने लामो परीक्षा पार गर्नुपर्छ। पार्टीको सदस्यता लिन चाहेकोबारे गहन प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण, पृष्ठभूमि र पारिवारिक अवस्थाको पनि अध्ययन गरेर लामो अनुसन्धानपछि मात्र सदस्यता दिइन्छ। पार्टी सदस्यले कडाइसाथ हरेक महिना लेबी तिर्नुपर्छ। लेबीमा व्यक्तिको कमाइको निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ। कमाइ थपघट भएमा हरेक महिना लेबी पनि फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले 'ओभरटाइम' काम गरेर बढी आर्जन गरेको अथवा कुनै परियोजनामा काजमा काम गर्न गएको भए उसले सोहीअनुसार त्यो अवधिको लेबी बढी तिर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति बिरामी परेर बिदा बसेको भएमा सोहीअनुसार लेबी कम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। व्यक्तिको विशेष ज्ञान र क्षमताका आधारमा पनि पार्टीले मूल्यांकन गर्छ।
पार्टीलाई चुस्त र सक्रिय बनाउन जिम्मेवारी वहन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन पार्टीका हरेक सदस्यलाई दुईतर्फी निगरानीमा राखिएको हुन्छ। एउटा अनुशासन समितिले उनीहरूको निगरानी राखेको हुन्छ भने अर्को पार्टीकै विशेष निगरानी समिति पनि हुन्छ। पार्टीका तल्ला समितिको नियमित अधिवेशनसँगै पार्टी सदस्यको माथिल्ला समितिको बढुवा विधि पनि पारदर्शी हुन्छ। माथिल्लो समितिमा रहेका पार्टी सदस्यको जिम्मेवारीमा गरिबी निवारणमा व्यक्तिगत रूपमा योगदान गर्नुपर्ने स्वयंसेवा पनि राखिएको छ। गरिबी निवारण र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्चालन विधिसँगै जोडिएर आउँछन्– चीनको विकास र चिनियाँ चरित्रको समाजवादी व्यवस्था। ४० वर्षदेखि चीनले अँगालेको सुधार र खुलापनसँगै प्राप्त पूर्वाधार विकास प्रविधिको आविष्कारले चीनलाई विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनाएको कुरा चिनियाँ प्राध्यापकले सरल तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्छन्। त्यही विकासलाई विश्वभरि छर्न चीनले बिआरआई अवधारणा ल्याएको पुष्टि गर्दै आलिशान पाँचतारे होटलमा राखेर प्रशिक्षण दिने गरिएको छ।
चीनले बोलाएका नेपाली पत्रकारहरूले फर्किएर आफूसम्बद्ध सञ्चारमाध्यममा आफ्ना अनुभव प्रवाह गरेका छन्। दुई दशक अगाडिसम्म छिमेकी मुलुक भएर पनि नेपालले चीनबारे यथेष्ट जानकारी लिन सकेको थिएन। पश्चिमा सञ्चार जगत्ले तोडमरोड गरेका र बंग्याइएका जानकारी लिन नेपाली बाध्य थिए। अहिले चीन भ्रमण गरेर फर्किएका नेपाली पत्रकारमार्फत नेपाली नागरिक चीनबारे धेरथोर जानकारी लिन सफल भएका छन्। पत्रकारबाहेक नेपालका नेताहरूले चीन भ्रमण गरेर देखेका, सुनेका र जानेका कुरा नेपालमा कहीं–कतै लागू गरेको देखिँदैन। नेताहरूले चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि आफ्नो पार्टी र आफ्नो कमिटीमा त्यसबमोजिम प्रशिक्षण अथवा अनुभव आदानप्रदान गरेको कतै सुनिएको छैन। नेपालका कर्मचारीहरू चीनमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने तालिम लिन्छन् र स्वदेश फर्किएपछि फर्जी बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नानीदेखि लागेको बानी जारी राख्छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चीन भ्रमणमा लिएका अनुभव केही दिन चौतारामा बसेर गफ सुनाउनमा सीमित भएको छ।
देव गुरुङको नेतृत्वमा एउटा टोलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन विधि र तल्ला कमिटीको कम्युन प्रणालीबारे स्थलगत भ्रमणसहित प्रशिक्षण लिएको थियो। लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई चीनले भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारबारे प्रशिक्षण दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी हेडक्वाटरमै लगेर प्रवचन दिन लगाइएको थियो। झलनाथ खनाल र माधव नेपालका टोलीले पनि थुप्रैपटक चिनियाँ आतिथ्य ग्रहण गरेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ– उनीहरूले चीनबाट के लगे नेपालमा ?
चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि चिया पसलमा बसेर 'चीनको विकास त आम्मामामा...!' भन्दै जिब्रो टोक्नेबाहेक कसैले केही गरेको पाइएन। 'चिनियाँले मज्जासँग सिन्काले खाएको देख्ता हामी त दंग प-यौं' भन्नलाई मात्र चीन आउनै पर्दैन। ठमेल अथवा पोखराको लेकसाइटमा प्रशस्तै चिनियाँ रेस्टुरेन्ट छन् र त्यहाँ बाह्रैमास चिनियाँ पर्यटक चपस्टिक्सले खाइरहेका हुन्छन्।
साभारः नागरिक दैनिक २०७६ मंसिर १८ गते (२०१९ डिसेम्बर ४) बुधबार।